စပိန်အတွက် Metric System ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
သငျသညျစခွေငျးငှါ စပိန်စကားမပြောတတ် ကောင်းစွာ, သင်မူကားလက်မ, ခွက်, မိုင်နှင့်ဂါလံကို အသုံးပြု. ပုံမှန်စပိန်သို့မဟုတ်လက်တင်အမေရိကန်တွေစကားပြောနေလျှင်မူကား, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့ထိုကဲ့သို့သော pulgadas နှင့် Milla အဖြစ်စကားလုံးများကိုသိကြလျှင်ပင်သူတို့ကောင်းစွာသင်နားလည်မည်မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှသူတို့တွင်, စပိနျစပီကာ - - အနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူကမ္ဘာအနှံ့စပိန်စပီကာဟာကိုသုံးပါ တိုင်းတာမက်ထရစ်စနစ်က နေ့စဉ်အသက်တာ၌။ ဒေသခံသို့မဟုတ်ဒေသထွက်တိုင်းတာတချို့နေရာတွေမှာအသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဗြိတိန် / အမေရိကန်ကတိုင်းတာမှုတွေရံဖန်ရံခါအချို့တိကျသောသာဓက (ဓာတ်ဆီဥပမာ, လက်တင်အမေရိကအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဂါလံအားဖြင့်ရောင်း) အတွက်အသုံးပြုကြသည်, ထိုမက်ထရစ်စနစ်ကတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာထဲမှာနားလည်သဘောပေါက်ပေမဲ့ စပိန်စကားပြောသောကမ္ဘာကြီး။
ဘုံဗြိတိန်တိုင်းတာခြင်း & စပိန် Metric ညီမျှသော
ဤတွင်စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်အသုံးအများဆုံးဗြိတိန်တိုင်းတာနှင့်၎င်းတို့၏မက်ထရစ် equivalents နေသောခေါင်းစဉ်:
1 စင်တီမီတာ (centímetro) = 0.3937 လက်မ (pulgadas)
1 လက်မ (pulgada) = 2.54 စင်တီမီတာ (centímetros)
1 ခြေလျင် (စက်ဝိုင်း) = 30.48 စင်တီမီတာ (centímetros)
1 ခြေလျင် (စက်ဝိုင်း) = 0.3048 မီတာ (Metro)
1 ခြံ (yarda) = 0.9144 မီတာ (Metro)
1 မီတာ (မက်ထရို) = 1.093613 ကိုက် (yardas)
1 ကီလိုမီတာ (kilómetro) = 0.621 မိုင် (Milla)
1 မိုင် (Milla) = 1.609344 ကီလိုမီတာ (kilómetros)
1 gram ပါ (gramo) = 0.353 အောင်စ (onzas)
1 အောင်စ (onza) = 28.35 ဂရမ် (gramos)
1 ပေါင် (Libra) = 453.6 ဂရမ် (gramos)
1 ပေါင် (Libra) = 0.4563 ကီလိုဂရမ် (kilogramos)
1 ကီလိုဂရမ် (kilogramo) = 2.2046 ပေါင် (Libra)
1 အမေရိကန်တစ်တန် (tonelada ရေိ) = 0.907 မက်ထရစ်တန်ချိန် (métricas toneladas)
1 မက်ထရစ်တန်ချိန် (tonelada métrica) (métricas toneladas) 1.1 မက်ထရစ်တန်ချိန် =
Volume ကို / စွမ်းရည် (volumen / capacidad)
1 milliliter (mililitro) = 0.034 အရည်အောင်စ (fluidas onzas)
1 milliliter (mililitro) = 0.2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (cucharaditas)
1 အရည်အောင်စ (onza fluida) = 29.6 milliliters (mililitros)
1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (cucharadita)5milliliters (mililitros) =
1 ခွက် (taza) = 0.24 လီတာ (litros)
1 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး (cuarto) = 0.95 လီတာ (litros)
1 လီတာ (litro) = 4.227 ခွက် (tazas)
1 လီတာ (litro) = 1.057 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး (cuartos)
1 လီတာ (litro) = 0.264 အမေရိကန်ဂါလန် (galones americanos)
1 အမေရိကန်ဂါလံ (galón americano) = 3.785 လီတာ (litros)
1 စတုရန်းစင်တီမီတာ (centímetro cuadrado) = 0.155 စတုရန်းလက်မ (pulgadas cuadradas)
1 စတုရန်းလက်မ (pulgada cuadrada) = 6.4516 စတုရန်းစင်တီမီတာ (centímetros cuadrados)
1 စတုရန်းပေ (ပိုင် cuadrado) = 929 စတုရန်းစင်တီမီတာ (centímetros cuadrados)
1 ဧက (ဧက) = 0.405 ဟက်တာ (hectáreas)
1 ဟက်တာ (hectárea) = 2.471 ဧက (ဧက)
1 စတုရန်းကီလိုမီတာ (kilómetro cuadrado) = 0.386 စတုရန်းမိုင် (Milla cuadradas)
1 စတုရန်းမိုင် (Milla cuadrada) = 2.59 စတုရန်းကီလိုမီတာ (kilómetros cuadrados)
ဟုတ်ပါတယ်, သင်္ချာ တိကျမှန်ကန်မှုကိုအစဉ်အမြဲမလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျဆိုပါကဥပမာအားဖြင့် သတိရ နေတဲ့ကီလိုဂရမ်2ပေါင်ထက်နည်းနည်းပိုနှင့်တစ်လီတာတစ်ကွတ်ထုတ်ယူထက်နည်းနည်းပိုပြီးကြောင်း, ထိုင် အလုံအလောက်အနီးကပ် အများအပြားရည်ရွယ်ချက်။ သငျသညျကားမောင်းနေလျှင်, 100 kilómetros por hora သင်တစ်နာရီလျှင်ထက်ပိုမို 62 မိုင်မောင်းနှင်မဖြစ်သင့်ကိုဆိုလိုသည်ကပြောပါတယ်တဲ့မြန်နှုန်း-န့်သတ်ချက်သည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသတိရပါ။
အီတလီတွင်ပုံစံများနှင့် Phraseological ကြိယာ
နေ့၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို - itai
Va '' အယ်လ် Diavolo
အားကစားဝန်ကြီးဌာန Collocation Lists မနှင့်အတူဝေါဟာရအဆောက်အအုံ
Faux Amis တစ်ဦးနှင့်အတူကစပြီး
Prendre အသုံးပြုခြင်းပြင်သစ်ဖော်ပြချက် - ယူပါရန်
ပြင်သစ် Expression "Allons-y က" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
Extend (သို့မဟုတ်ငြင်းဆို) ပြင်သစ်တစ်ဦးဖိတ်ကြားလွှာလုပ်နည်း
အားလုံးအချိန်များ၏ Scariest ဝိညာဉ်, Movies
'' ဒီအသံနှင့် Fury '' Quotes
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့အခန်းဖော်ဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့ အကယ်. ပြုပါရန်
'' အဘယျသို့ကလေးသူငယ်ဒီ Is? ' စပိန်: '¿ Que niño es este?'
"ဟုအဆိုပါကြေးမုံမှာမီး: သရဖူ Heights, ဘရွတ်ကလင်းနှင့်အခြားအထောက်အထားတွေကို"
(Kill မှ) ပြင်သစ်ကြိယာ "Tuer" Conjugate ဖို့သင်ယူပါ
အဆိုပါ Gushi ဒမ်း - Turpan အတွက် Subeixi ယဉ်ကျေးမှုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ
Beginners များအတွက်သီဆိုနည်းစနစ်သင်ခန်းစာ - Vowel ၏ Enunciation
1888 ၏မဟာ Blizzard
စာပေ Quotes နှင့်စကား
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း Slalom ရေလွှာလျှောစီးခြင်းအတွက်ရမှတ်နံပါတ်များကိုနားလည်ခြင်း
စာဖတ်ခြင်းအခက်အခဲများရှာဖွေရေးမှာမှ Miscue ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအသုံးပြုခြင်း
Da Vinci ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲအတွက်ခန္ဓာကိုယ်လက်
ပြင်သစ်လက်အောက်ငယ်သားအပိုဒ်: ပြင်သစ် Grammar နှင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ
ထိပ်တန်း 10 အလုပ်ရှာဖွေရေး span ဘွန် Jovi သီချင်းများ
တစ်ဦးလက်နက်အဖြစ် Pontiac ရဲ့ပုန်ကန်မှုများနှင့်ကျောက်ရောဂါ
မိုးသည်းထန်စွာသတ္တု Timeline ကို